Ihe omuma nke John Dalton | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa anyị na-abịa na biographical ọzọ nke otu n'ime ndị sayensị kachasị mkpa nyeere sayensị aka ka ọ bụrụ ihe ọ bụ taa. Anyị na-ekwu maka ya John dalton. Ọ bụ ọkammụta-physicist na meteorologist nke mepụtara usoro ọgbara ọhụrụ nke tioomi atọm. Nwoke a anataghi otutu nkuzi ma obu akwukwo, mana ochicho ya imara ihe obula mere ka nkuzi ya me ka odi nma.
Na post a ị nwere ike ịmụ banyere njigide nile nke John Dalton na akụkọ ya site na mmalite ruo na njedebe. You chọrọ ịmatakwu banyere ya? Nọgide na-agụ ihe.
2 Prọfesọ na onye nyocha n'otu oge ahụ
3 Iwu nke otutu otutu
4 Ọgwụgwụ nke ọrụ ya
Ọrụ sayensị ya ndị mbụ metụtara gbasara gas na ọrịa anya o nwere, nke a na-akpọ agba isi iji kwanyere aha ya ugwu. Ọ bụ ọrịa na-eme ka ị ghara ịmata ụfọdụ agba n'ime ụdịdị dị iche iche.
Ozugbo amatara ya dika onye sayensi, o wuru onodu siri ike na ulo akwukwo. Mgbe o mechara nyocha, ọ chọpụtara ihe anyị maara dị ka Iwu nke Otutu Ogologo. Ọ bụ iwu na-akọwa ịdị arọ nke ihe ndị metụtara mmiri ọgwụ. Ebe ahụ ka ọ nwere ike ịtọpụta tiori gbasara iwu obodo ma kpọọ ya Tondị atom nke Dalton. Scientifickpụrụ sayensị a dị adị na narị afọ nke iri na itoolu niile ma na ekele maka ya, enwere ike ịga n'ihu na ụwa onwu.
Nchọpụta ndị a niile mere ka ọ bụrụ otu n'ime nna nke onwu.
Prọfesọ na onye nyocha n'otu oge ahụ
John Dalton nwere ọrụ abụọ a n'otu oge. Ha abụọ nyere ya aha dị mkpa na ọnọdụ akụ na ụba ka elu iji nwee ike ịrara onwe ya nye ọrụ ya nke ọma. Na 1802, o guzobere iwu nke nrụgide ele mmadụ anya n'ihu (nke a maara dị ka iwu Dalton) na ncheta nke akpọrọ Mmiri mmiri site na mmiri na mmiri ndị ọzọ. Ozizi a gosipụtara na nrụgide nke ngwakọta gas nwere ngụkọta nke nrụgide nke akụrụngwa nke ọ bụla.
Ewezuga nke a, Dalton guzobere ezigbo mmekọrịta uzuoku nke ikuku na okpomoku. Site na nke a amatara na, ka okpomoku nke gas na-abawanye, otu a ka nrụgide ọ na-ewe na oghere mechiri emechi. N'ụzọ dị otú a na ụkpụrụ ndị a, arịa kichin nke anyị maara taa dịka onye na-arụ nrụgide na-arụ ọrụ.
Mmasị ya na gas bụ n'ihi nnukwu ihe omume ntụrụndụ o nwere na ọmụmụ ihu igwe. Ọ na-ebu ngwa ọrụ ya mgbe niile iji nwee ike ịlele mgbanwe ndị dị na mbara igwe. Ọ hụrụ ima ikuku anya ma dee ihe nile o mere n'ime akwụkwọ akụkọ ya. N'ihi ọchịchọ ịmata ihe a, John Dalton ewetawo ọtụtụ ọganihu na sayensị.
Iwu nke otutu otutu
Ugbua na 1803 ọ malitere ịmepụta ihe ga-abụ onyinye kasịnụ ya na sayensị. Ruo ugbu a, ọ bụghị na o mere obere, kama na nke a bụ ihe ga-eme ka ọ nwekwuo ọganihu. Ihe a nile laghachiri n'otu ụbọchị ya mgbe ọ nọ n'ụlọ nyocha ya na-amụ mmeghachi omume nke nitric oxide nwere oxygen. Ọ bụ n'oge a ka ọ chọpụtara na mmeghachi omume nwere ike ịdị iche iche. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ịbụ 1: 1,7, oge ndị ọzọ 1: 3,4. Ngbanwe a na oke abụghị ihe ọ ga-aghọta nke ọma, mana ekele nye ya ọ nwere ike ịhụ mmekọrịta dị n'etiti data ahụ niile ma guzobe ihe Iwu nke Otutu Ogologo si bụrụ.
Iwu a na-ekwu na na mmeghachi omume kemịkal, ihe dị iche iche nke ihe abụọ na-ejikọta ibe ha mgbe niile na ọnụ ọgụgụ zuru oke. N'ihi nkọwa a, ọ malitere ịmalite ịghọta ụkpụrụ mbụ nke echiche atọm.
Nchoputa nke nchoputa a di nma nke oma ma ekwuputara ya okwu n'otu uzo ahu. Mgbe ọtụtụ afọ nke ide ihe gasịrị, na 1808, edepụtara akwụkwọ ya kachasị ama n'akwụkwọ. Aha akwụkwọ ahụ Usoro ohuru nke ihe omimi. N'ime akwụkwọ a ị nwere ike ịnakọta echiche niile nke atọm na ọkwa dị iche iche nke usoro iwu metụtara ihe anyị maara taa dị ka Iwu Dalton. Maka nkọwa ọzọ, ọ dọtara ụfọdụ irighiri ihe ọ bụla ka, site n'ihe atụ, ndị mmadụ nwere ike ịmatakwu etu mmeghachi omume kemịkal si arụ ọrụ.
Ewezuga ihe ndị a niile, ọ nwere ike bipụta ndepụta mbụ nke igwe atọmịk na akara akara taa bụ akụkụ nke okpokoro oge. N’ụzọ na-atụghị anya ya, ọ bụghị ndị sayensị niile ka akwadoro echiche Dalton.
Ọgwụgwụ nke ọrụ ya
Na 1810 e bipụtara akụkụ nke abụọ nke akwụkwọ ahụ. N'akụkụ a, o nyere ọhụụ ọhụrụ banyere ihe ọmụmụ ya. N’ụzọ dị otu a ọ gosipụtara n’ozizi ya ziri ezi. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na 1827, Akụkụ nke atọ nke echiche ya pụtara ìhè. Dalton ghọtara onwe ya dị ka onye nkuzi ọ bụghị dịka onye nyocha. Agbanyeghị na ọ bụ onye otu Royal Society site na 1822 wee rite nrite site na ndị sayensị a na 1825, ọ na-ekwukarị na ọ kpatara ndụ site n'inye klaasị na nkuzi.
N’inye ya ihe niile ọ rụzuru n’oge ndụ ya niile, n’afọ 1833, a na-enye ya ego ezumike nka kwa afọ. Afọ ikpeazụ nke ndụ ya nọrọ ezumike nká na na Julaị 27, 1844 ọ nwụrụ n’ihi nkụchi obi. Mgbe Dalton choro, emere otutu ozu ka amara ihe kpatara oria ya. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, a ghọtara ya dị ka agba ìsì.
A maara na ọrịa ahụ abụghị nsogbu n'anya, kama ọ bụ nsogbu na-akpata ụkọ ihe ụfọdụ na ike ike. N'ihi ekele niile na oke onyinye ya na sayensị, e liri ya na nsọpụrụ eze olili ozu nke ihe karịrị mmadụ 400.000 bịara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, John Dalton bụ otu onye ọkà mmụta sayensị ọzọ na-achịkwa iji bulie ma tinye aka na sayensị nke sayensị n'ihi ọchịchọ ịmata ihe na nnọgidesi ike nke nyocha ya. Ihe nke a na-eme ka anyị mụta banyere mkpa ọ dị ịrara onwe anyị nye ihe masịrị anyị n'ezie na ndụ anyị na-agbakwa ya gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » John Dalton Biography